नागढुंगाबाट ६ केजी सुन बरामद
प्रहरीले नागढुंगाबाट ६ केजी सुनसहित १ जनालाई पक्राउ गरेको छ । विशेष सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी प्रभाग थानकोटको संयुक्त टोलीले आइतबार साँझ करिव ३ करोड मूल्य बराबरको सुन बरामद गरेको हो ।
नेविसंघद्वारा सरकारी सवारीसाधनमा तोडफोड
कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार तुलसीपुरमा तीनवटा सरकारी गाडीमा तोडफोड गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुसार अदुवाबाली अनुसन्धान केन्द्र सल्यानको बा २ झ ३०७० र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रुकुमको बा १ झ ८४२२ नम्वरको गाडीको सिसा नेविसंघका विद्यार्थीले तोडफोड गरेका हुन् ।
६ जना प्रहरीको २० वर्षपछि बढुवा
नेपाल प्रहरीका ६ जना कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षपछि बढुवा भएका छन् । कर्मचारीको सरुवा-बढुवा लगायत वृत्तिविकासमा प्रभावकारी कार्ययोजना नहुँदा २०५४ सालमा सेवा प्रवेश गरेका ६ जना कर्मचारी झण्डै २२ वर्षपछि पदोन्नती भएका हुन् ।
डा. केसीको समर्थनमा हस्ताक्षर संकलन
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि जुम्लामा शनिबारदेखि १५ औं अनसन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । प्रहरी नियन्त्रणकै बीच अनशन सुरु गरेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनका भाइ किशोर केसीले बताए ।
सुनमा मिसावट गर्ने बर्दियाका १२ ब्यापारी पक्राउ
सुनका गहनामा धातु मिसावट गरी विक्रि गरेको आरोपमा बर्दियाका १२ जना ब्यापारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तगर्त बजार अनुगमन समितिले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानका १२ वटा सुन पसलमा मिसावट भेटिएपछि त्यसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको हो ।
शितगंगा ९ को वडा कार्यालय जलेर नष्ट
अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका ९ को वडा कार्यालयका सबै सामाग्री जलेर नष्ट भएको छ ।
बर्खे आलु उत्पादनमा वृद्धि
डडेल्धुरामा यो वर्ष वर्खे आलुको उत्पादनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट आलुखेती गर्नुका साथै समय–समयमा वर्षा हुनु र उन्नत जातको बीउ र समयमा गोडमेल गरिएकाले यो वर्ष वर्खे आलुको उत्पादनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
हुम्लामा रोपाइँको चटारो
हुम्लाका किसानलाई रोपाइँको चटारोले छोएको छ । अधिकांश किसान आकासे पानीको भरमा रहेकाले अहिले पर्याप्त पानी परेपछि सहज महसुस गर्दै रोपाइँमा व्यस्त भएका हुन् । सिँचाइको राम्रो सुविधा नहुँदा यहाँका किसान हरेक वर्ष आकासे पानीको भरमा रोपाइँ गर्ने गर्छन् ।
सञ्चारमन्त्रीद्वारा राससको निरीक्षण
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विराटनगरस्थित राष्ट्रिय समाचार समितिको प्रादेशिक कार्यालयको शनिबार निरीक्षण गरी त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी लिए ।
स्थानीय उत्पादनलाई बजार समस्या
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ मा सञ्चालनमा आएको सुदूरपश्चिम मसाला उद्योग बजार समस्याका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
बाल विवाहविरुद्ध गाउँ–गाउँमा प्रहरी
सामाजिक कुप्रथाका विरुद्ध कालिकोट प्रहरीले अभियान सुरु गरेको छ । बाल विवाह, बहुविवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा, लागुऔषध दुव्र्यसनीलगायतका विरुद्ध प्रहरीले अभियान सञ्चालन गरेको हो ।